शारिरिक शक्ति बढाउनको लागि घरेलु उपायहरु। - Varient - News Magazine
Jul 20, 2021 - 09:27
प्रत्येक व्यक्तिको शरिरको बल तिनीहरूको आहार र जीवनशैलीमा निर्भर गर्दछ। शारीरिक शक्ति तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीसँग पनि सम्बन्धित छ। शक्ति अभावका कारण, तपाईं कमजोरी महसुस गर्नुहुन्छ र यस कारणले गर्दा तपाईं धेरै रोगहरूको सिकार हुनु सक्नुहुन्छ। रोगबाट बच्न र कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा गर्नका लागि शरीरमा सही स्तरमा बल हुनुपर्दछ।
यसको लागि, आज हामी तपाईंलाई शक्ति बढाउने उपायहरू विभिन्न व्यायाम र खानाको बारेमा बताउँदैछौं।
शक्ति भनेको के हो?
कुनै व्यक्तिको शारीरिक ताकतलाई शक्ति भनिन्छ। जब तपाईं वजन उठाउनुहुन्छ वा कुनै भारी वस्तु उठाउँनुहुन्छ, त्यसको लागी आफ्नो शरीरको शक्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ। शारीरिक बल व्यक्ति अनुसार फरक हुन सक्छ। तपाई आफ्नो शक्ति बढाउनका लागि तपाईंले तल दिइएका उपायहरू र सुझावहरू अपनाउनुपर्नेछ।
१.शक्ति बढाउन नियमित रूपमा दौड्नुहोस्।
नियमित रूपमा दौडनु शरिरको लागी राम्रो हो। यो शक्ति वृद्धि गर्न को लागी एक सजिलो तरीका हो। दौडले बोसो र क्यालोरीलाई कम गर्नुका साथै, यसले खुट्टा र हिप्सको मांसपेशी पनि बलियो बनाउँछ। शक्ति वृद्धि गर्न तपाईले दैनिक बिहान एक घण्टा दौडनुपर्दछ। यसले तपाईंको वजनलाई समेत नियन्त्रणमा राख्छ।
२.पौडी खेल्नु शक्ति बढाउने तरिका हो।
नियमित पौडी खेल्दा शारीरिक शक्तिमा द्रुत बृद्धि हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिको लागी सहजता बढाउन, शक्ति प्राप्त गर्न, मांसपेशीहरूलाई लचिलो बनाउन र शरीरको वजन ठीक राख्न पौडी खेल्नु उत्तम हुन्छ। दिनमा ३० देखि ४० मिनेट पौडी खेलेर, तपाईं बलियो र स्वस्थ रहन सक्नुहुन्छ।
३.शारीरिक शक्ति बढाउन पुशअप गर्नुहोस्।
शारीरिक शक्ति वृद्धि गर्न, व्यायाम नियमित रुपमा गर्नु पर्छ। तपाईं जहाँसुकै पनि पुशअपहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो व्यायाम गर्न कुनै उपकरण आवश्यक छैन। बिहानको व्यायाम तपाईंलाई फिट राख्नको लागि बढी उपयोगी हून्छ। यो व्यायामले तपाईको छाती, काँध र हातका मांसपेशीहरू बलिया हुन्छन्।
एरोबिक्स गरेर, तपाईं सजिलै आफ्नो शरीरको शक्ति वा क्षमता बढाउन सक्नुहुन्छ। महिलाहरू एरोबिक्स गर्न बढी इच्छुक हुन्छन्। एरोबिक्सले तपाईको शक्ति बढाउँनुका साथै तपाईको मुटु स्वस्थ पनि हुन्छ।
५.सीढीहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
अफिसमा होस या मल सपिंग सेन्टरमा, तपाईंले लिफ्टको सट्टा सीढीहरू प्रयोग गर्नुहोस। यो शक्ति वृद्धि गर्न को लागी सबैभन्दा सरल तरीका मानिन्छ।
५.शक्ति बढाउन वजन उठाउँनुहोस।
छोटो समयमा मांसपेशिहरु मजबूत गर्न को लागी तपाईले कम्तिमा १५ मिनेट को लागी तौल उठाउँनुपर्छ। यसले तपाईंको शारीरिक क्षमता बढाउँछ। जब तपाईले भार उठाउन सहज महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ, तब तपाईले बिस्तारै तौल बढाउनु पर्छ। यसले तपाईंको शरीरलाई कुनै पनि तौल उठाउँन बलियो बनाउँदछ।
६.योगा शक्ति वृद्धि गर्ने माध्यम हो।
शताब्दियौंदेखि योगा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको लागि उपयोगी साबित भइरसकेको छ। योगा गरेर तपाईं आफ्नो शरीर र दिमागका थुप्रै विकारहरूलाई जित्न सक्नुहुन्छ। धेरै व्यक्ति यस बारे सचेत नहुन सक्छ, तर योगले तपाईंलाई कडा परिश्रम र धैर्य र शक्ति बढाउनको लागि मद्दत गर्दछ। योग नियमित गरेर तपाईं आफ्नो शरीरको लचकता र शक्ति संग सन्तुलन कायम गर्न सक्नुहुन्छ।
माथि उल्लेखित सबै अभ्यासहरू निरन्तर कडा मेहेनतका साथ गर्नुपर्दछ र स्थिर रहनु आवश्यक छ। किनकि यी सबै अभ्यासहरूका नतीजाहरू निर्धारित समय पछि मात्र देखिन्छन्।
शक्ति बढाउन के खाने?
व्यायाम मात्र हैन, तर तपाईंको खानपान पनि शक्ति वृद्धि गर्न धेरै महत्त्वपूण छ। यी उपायहरू गर्नाले, तपाईं सजिलैसँग शक्ति बढाउन सक्नुहुनेछ।
बिहानको खाजाः तरकारी र अण्डाहरू, सुन्तला, हरियो चिया आदि।
बिहानको खाजा पछिः सुख्खा फल, नाशपाती आदि।
लन्चः मसूर, चामल, रोटी, सलाद, मासु, माछा, अलिभ तेल आदि।
खाजा पछिः स्याउ र चीज आदि।
पोष्ट वर्कआउटः पालक, केरा र आँप आदि।
रातीको खानाः चिकन, पालक, गाजर, नाशपाती आदि।
सुत्नुअघिः चीज र दुध आदि।
१.ब्रेकफास्ट शक्ति बढाउनको लागि आवश्यक छ।
यदि तपाइँ स्वस्थ र पौष्टिक आहारको साथ दिन सुरू गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ दिनभरि स्फुर्ती महसुस गर्नुहुन्छ। यससँगै, यस्तो खाजाले तपाइँलाई दिनभर बलियो बनाउँछ। तसर्थ, तपाईं हरेक बिहान पौष्टिक नास्ता खाने बानी हुनु पर्छ।
२.खानामा प्रोटीन लिँदा शक्ति बढ्छ।
शक्ति बढाउनको लागि र शरीरको मांसपेशीहरू स्वस्थ राख्नको लागि प्रोटीन अत्यन्त महत्त्वपूणर् छ। थप रूपमा, प्रोटीन फ्याट कम गर्नका लागि अत्यन्त उपयोगी तत्व मानिन्छ। यसको लागि तपाई रातो मासु, कुखुरा, माछा, साल्मन माछा, अण्डा, दुग्ध उत्पादन, जस्तै दुध, चीज, दही, खान सक्नुहुन्छ।
३.फलफूल र तरकारीहरूले शक्ति बढाउँछ।
शक्ति वृद्धि गर्न तपाईंले फलफूल र तरकारीहरू तपाईंको खानामा समावेश गर्नुपर्छ। फलफूल र तरकारीमा भिटामिन, खनिज, एन्टिआक्सीडन्ट र फाइबर पर्याप्त हुन्छ, जसले तपाईंको पाचन सन्तुलन राख्दछ। तपाईको वजनलाई नियन्त्रणमा राख्न तपाईले अधिक फलफूल र तरकारीहरू उपभोग गर्नु पर्छ। शारीरिक शक्ति बढाउन तपाईले स्याउ, बेरी, अनार, सुन्तला, केरा, पालक, ब्रोकाउली, टमाटर,सिमी, फूलगोभी, सलाद, मटर आदि खानामा समावेश गर्नुपर्दछ।
४.व्यायाम पछि कार्बोहाइड्रेटयुक्त समृद्ध आहार।
कार्बोहाइड्रेट शारीरिक शक्ति कायम राख्न आवश्यक छ। व्यायाम पछि यो लिनको लागि अधिक महत्त्वपूणर हुन्छ। यसको लागि तपाइँ मकै, गाजर र किशमिश उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस बाहेक तपाई व्यायाम पछि चामल, आलु, ओट्स आदि खान सक्नुहुन्छ।
५.शक्ति बृद्धि गर्न प्रशस्त पानी पिउनुहोस्।
शारीरिक क्षमता वृद्धि गर्न, प्रशस्त पानी पिउनुहोस्। कहिलेकाँही अत्यधिक पसिनाको कारणले, शरीरमा पानीको कमी हुन्छ र यसले तपाईंको शरीरमा थकान उत्पन्न गर्दछ। यस अवस्थामा अधिक पानी पिउनु पर्छ। ताकि पानीको अभाव पूरा होस। यसको साथ, तपाईं ग्रिन चिया र निम्बू पनि खान सक्नुहुन्छ।
६.डाइटमा फ्याट लिदाँ बल बढ्छ।
यहाँ फ्याटको अर्थ स्वस्थ बोसो हो। स्वस्थ बोसोले तपाईलाई स्वस्थ राख्न काम गर्दछ। यस्ता फ्याटले तपाईंको टेस्टोस्टेरोनको स्तर बढाउँछ। जस्तै अन्न, रातो मासु, जैतूनको वा अलिभ तेल, सुक्खा फल, माछा आदी साथ यो फ्याट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
७.शक्ति बढाउन बाहिरी खानाबाट टाढा रहनुहोस्।
बाहीरको जंक खानाले तपाईंलाई बिरामी बनाउन सक्छ। साथै यसले तपाईंलाई अल्छी बनाएर तपाईंको शक्ति कम गर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ भने, बाहिरी जंक फूडबाट टाढा राख्नु पर्छ।